Muxuu Mikel Arteta ka yiri kaddib guuldarradii Arsenal ay kala kulantay kooxda Villarreal? – Gool FM
(Yurub) 30 Abriil 2021. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa xaqiijiyay in natiijada guuldarradii ka soo gaartay Villarreal ay ahayd natiijada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah marka la fiiriyo duruufaha ciyaarta.
Arsenal ayaa lagu soo garaacay Spain kulan labo xiddig oo labada dhinac ah garoonka laga saaray, kaddib markii loogu awood sheegtay 2-1, ciyaartii lugta hore ee wareega afar dhammaadka tartanka UEFA Europa League, goolka Gunners oo ahaa rigoore waxaa u dhaliyay Nicolas Pepe.
Shabakada caalamiga ah ee “BBC Sport” ayaa shaacisay wareysi uu bixiyay Mikel Arteta kaddib ciyaarta waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Ma aanan dooneynin inaan halkaan imaadno oo aan guuldareysano, adigana kaddib sida ay ciyaartu u dhacday, waa inaad aqbashaa natiijada, haddii lagaa badiyo, wixii la qabtay ayaa ahaa natiijada ugufiican.”
“Uma xakameynin ciyaarta si ku filan, ma aanan sameynin hanjabaad nagu filan, mana aanan qabin rabitaan ah inaan weerarno, laakiin qeybtii labaad ee ciyaarta gabi ahaanba way ka duwaneyd.”
“Waxaan helnay fursad weyn oo aan ku barbareyn karnay oo ka timid dhanka Aubameyang, waxaana ku kalsoonahay inaan fursad u heysano inaan guuleysano.”
Si kastaba ha ahaatee, Labada koox ayaa markale ku kulmi doona Khamiista soo socota garoonka Emirates ee magaalada London, Arsenal ayaana u baahan inay ku guuleysato gool nadiif ah si ay uga gudubto finalka.